Ny ankamaroan'ny mponina ao Indonezia dia manambara ny finoana silamo, noho izany dia miorina eo amin'ny firenena moskea maro, izay mitsidika tsy tapaka an'ireo Silamo mpino rehetra. Mankalaza ireo trano miavaka ireo sy ireo mpizaha tany avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao.
Moske 7 lehibe ao Indonezia
Ny moskeingo tsirairay natsangana teto amin'ity firenena ity dia manana ny tantarany manokana, ary ny tokatranony dia miavaka amin'ny fomba manokana:
Mosquée Istiklal dia miorina ao an-drenivohitr'i Indonezia, Jakarta . Ity no rafitra lehibe indrindra ao amin'ny faritra atsimo-atsinanan'ny firenena, miatrika marbra fotsy, eo akaikin'ny tranoben'ny governemanta. Ny anarany, izay midika hoe "fahaleovan-tena", no nomen'ny moske ho fanomezam-boninahitra ny fahafahan'ny firenena tamin'ny 1945. Ny moske dia manana fidirana fito, efitrano fanaovana vavaka ary efitrano manokana ho an'ny fakana am-bavany. Ny haavon'ny kofehy ambonin'ilay tranobe lehibe dia voaravaka spire metaly miaraka amin'ny kintana sy ny crescent. Ao amin'ireo efitrano efatra amin'ilay trano dia misy balcony. Ao amin'ny moske dia misy efitrano hanaovana fety sy madrassas.
Baiturrahman amin'ny Paradisa, na ilay Moske Lehibe dia miorina eo afovoan'ny tanànan'i Banda Aceh. Vita soa aman-tsara ilay tsunami nahatsiravina tamin'ny taona 2004. Ny rafi-piarahamoniny dia voakasiky ny kolontsaina indiana sy Eoropeana, saingy amin'izao fotoana izao, io moske io dia iray amin'ireo toerana masin'ny vahoaka Silamo any Indonezia.
Ny Masjid Raya, na ny Moske Lehibe, dia hita ao Medan ao Sumatra . Ity trano ity dia iray amin'ireo toerana lehibe indrindra ao an- tanàna. Tahaka ny Moske Bayturrahman ao Raya, ity toeram-ponenan'ny tontolon'ny miozolomana ao Indonezia ity dia nanohitra mafy ny fisian'ireo singa tamin'ny taona 2004 ary lasa mariky ny kolontsain'ny firenena sy ny fivavahana.
Agung Demak , iray amin'ireo lehibe indrindra any Indonezia, dia miorina eo amin'ny nosy Java ao afovoan-tanànan'i Demak. Azo heverina fa naorina tamin'ny taonjato faha XV izy io. Ny fananganana ny maoske dia ohatra iray amin'ny tranokala Javanese nentim-paharazana. Vita amin'ny hazo izy io, ary misy tafo maromaro ny tafo. Ny varavarana fidirana dia voaravaka sary sokitra izay mampiseho zavamaniry sy biby.
Ny moskea Sultan Suryansiyah dia miorina eo atsimon'ny nosy Kalimantan any Quinn Utara, akaikin'ny tanànan'i Banjarmasin . Ny tranobe dia naorina mihoatra ny 400 taona lasa izay. Eo akaikin'ny moske dia ny fasan'i Sultan Suryansiah - ilay mpitondra teo aloha tao Kalimantan, izay niova fo ho silamo. Ny tranobe dia natao ao amin'ny style Banjar miaraka amin'ny mihrab, naorina avy amin'ny trano lehibe. Ao anatiny, ny rindrina dia voaravaka firavaka sy soratra amin'ny soratra arabo marigny.
Tiban Régdo Tourén dia monina ao amin'ny faritanin'i Malang any Indonezia. Antsoina koa hoe Moske Flying for ny rafitra mahazatra izy io. Misy karazany maromaro ao aminy: Tiorka sy Sinoa, Indonezianina ary Indianina. Ny fasadany dia natao amin'ny manga manga manga sy manga. Ny rindrin'ny trano dia voaravaka mosaika misy firavaka voninkazo. Toy ny hoe miparitaka eny amin'ny rivotra ny tranobe dia manohana tsanganana roa. Ny tranobe 10 eo amin'ny moske dia mifamatotra amin'ny efitrano mampiavaka azy.
Ny moskea Dian Al-Mahri (ny faharoa dia ny Mosquée Golden Dome na ny Masjid Kubah Emas) dia hita any West Java, ao an-tanànan'i Depot. Ny kanto volamena volamena dia tsy mahasarika mpino silamo, fa koa mpizahantany maro mankany amin'ny moske.
Ny akanjon'akanjo fohy ho an'ny vehivavy
Tompo Shiva - marika amin'ny andriamanitra ary mampidi-doza ve izany?
Firy ny ankizy manomboka mandady?
Ny fandevenana an'i Justin Bieber dia handoa 230 tapitrisa dolara
Jerosalema artichoke - rahoviana mba hijinjana?
Harm on the infrared heater
Bijouterie avy amin'ny vato voajanahary
Nahoana no ilaina ny Vitamin E?
Ahoana ny fomba handresena ny fahatsapana hanoanana?
Dresses amin'ny asa ao amin'ny birao
Ny tsy fitoviana eo amin'ny fiaraha-monina amin'ny vohoka
Courgettes - tsara sy ratsy
Kitapo Capsule amin'ny fararano 2013
Ahoana no hamehezana môtô?
Karazan'akanjo maoderina 2013
The Museum of Andersen